ရေးသားသူ maylay9comments:
ဘယ်သူမှ လျော်ကြေးပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဘဝကို ထုဆစ်လို့ရမယ် ထင်သလား...
ဘယ်တော့မှ ကြိုးစားမှာ မဟုတ်ဘူး။
နာကျင်စရာ ကောင်းတာ ရှိပါဦးမလား။
ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ များနေပေမယ့်
ဆုမတောင်းဖြစ်တာ ကြာ.. ပြီ..။
ရေးသားသူ maylay3comments:
မေလေးရဲ့ အလွဲများ ၂
--- မေမေနဲ့တူတူ ဈေးရောင်းရပါတယ်။ မနက်အစောကြီးထပြီး ဈေးကြီးကို သွားပြီးဝယ်၊ ကိုယ်တို့ ဈေးကလေးမှာ ခွဲစည်းပြုပြီး ပြန်ရောင်းတာပေါ့။ မေမေစည်းနှောင်ပေးလိုက်တဲ့ ကနစိုသီးတွေ၊ မရမ်းသီးတွေကို ခြင်းတောင်းထဲ ထည့် ရွက်ပြီး ဈေးရုံတလျှောက်နဲ့ ရပ်ကွက်လေးတလျှောက် လှည့်အော်ရောင်းတာ…. လှမ်းခေါ်ဝယ်သူတွေက ဟဲ့ နင့်အသီးတွဲတွေက နည်းနည်းလေးပဲ ပါတော့တယ်။ လျှော့ဦးဆိုတော့ ကိုယ်ပြန်ပြောလိုက်ပုံက သင်းတယ်။ မယူချင် မယူနဲ့။ မလျှော့ဘူးလို့း) (အသီးတွဲက နည်းနည်းလေးပဲကျန်မှာပေါ့။ နှစ်လှမ်းသုံးလှမ်းလောက် လှမ်းပြီး ယူကြဦးမလား တခွန်းအော်ပြီးရင် အော်တိုဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့်လက်က ကနစိုသီး တစ်လုံး ဖြုတ်ပြီးသားပဲ ဟဲဟဲ။)
--- ငါး၊ပုဇွန်အပြွန်းတွေ(သူများမယူတဲ့ ငါးအသေးအနှုတ်ငါးစုံတွေ) ပုတ်ပြတ်နှုန်းကို ခေါက်ပြန်ပေးပုံစံနဲ့ ယူရောင်းပါတယ်။ ငါးရောင်းတဲ့သူက သေသွားတဲ့ ငါးတွေ၊ပုဇွန်တွေကို ရွေးဖယ်ပုံနေရင်း သနားနေပြန်ရော။ မေမေကတော့ ပြောသား။ သနားနေရင် နင်တို့ ကျောင်းဘယ်လိုနေမလဲ၊ စားမလဲတဲ့။ မသေသေးတဲ့ ငါးတွေပုဇွန်တွေတော့ မသေသင့်ဘူးပေါ့လို့။။ မေမေက ခေါင်းခေါက်ပါတယ်။ ဘာရမလဲ။ ဈေးနောက်ဖေး ရေနှုတ်မြောင်းထဲကို မသေသေးဘဲ ပါလာတဲ့ ငါး၊ပုဇွန် ပိစိကွေးအရှင်တွေကို ပြန်လွှတ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီး ကိုယ့်ထက် နွမ်းပါးပုံရတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ မောင်လေးအရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုလည်း နေ့တိုင်း ငါး၊ပုဇွန် လက်တဆုပ်စာ(မေမေမသိအောင်) ပေးပေးနေပြန်ပါတယ်။ (ဘယ်သူမှ ခုထိမသိကြဘူးး) ငါးရောင်းသူက မသနားတတ်ဘူးဆိုတာ ဘယ်မှာဟုတ်လို့လဲ နော်း)
--- မေမေက မောင်လေးကို ပေါင်မှာတင်ထိုင်ပြီး ကိုယ်နဲ့ညီမလေးကိုကျတော့ တစ်ခုံပေါ့။ ဖေဖေ့ဆိုက်ကားပေါ်မှာ ထိုင်ကြပြီး ဘွားလေးဆီ မိသားစုလိုက် သွားလည်ကြပါတယ်။ ညီအစ်မနှစ်ယောက်သား စကားတွတ်ထိုး။ ဟိုဘက်ငေး၊ ဒီဘက်ငေး မပြီးနိုင်ကြဘဲနဲ့ ကိုယ့်လက်မချောင်းက ယားလာပါတယ်။ ကုတ်လို့လည်း မရ။ ညီမလေးလုပ်ပေးတာလည်း မပြေ၊ အယားပြေစေမယ့် နည်းကို တွေ့ပြီ။ ဖေဖေ့ဆိုက်ကားကယ်ရီယာဘီး(ဖေဖေနင်းနေဆဲဘီး)ထဲကို လက်ချောင်းကို ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ ကဲ အဆင်ကိုပြေလို့း)။။ တဖြည်းဖြည်း နာလာမှ မျက်ရည်တွေ ပုလဲခ၊ အသံပြဲနဲ့ အော်၊ ဖေဖေက ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ လက် စက်ဘီးထဲမှာလို့ ဖြေတာ။ (ကိုယ့်အဖေမို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ သူလည်း လွဲတာပဲ) နင်းနေတာ မရပ်လိုက်ဘဲနဲ့ လက်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်လေတဲ့။ ထည့်တုန်းက ထည့်ပြီး ထုတ်ဖို့ကျ မရဲဘူး။ ဘာကိုမှန်းမသိကြောက်နေတာ ဟဟားး။ ဖေဖေ ဆိုက်ကားရပ်ပြီး လက်မကို ဆွဲထုတ်တော့ လက်မအဆစ်ရိုးကလေးကိုပါ မြင်နေရပြီ ပွန်းနေတာလေ။ ဘွားလေးဆီ မသွားတော့ဘဲ ဆေးခန်းပြေးရတာပေါ့။ ၇ ချက် ချုပ်ရတယ်။ လက်မအဆစ်ရိုးလေးက ခပ်လွဲလွဲလေး စောင်းနေတယ် ဟဲဟဲး)
--- ဒီထက်အရင် အလွဲက မောင်လေး မမွေးခင်ပေါ့။ မေမေရယ် ညီမလေးရယ် ကိုယ်ရယ် ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြတယ် ညပွဲ။ ဖေဖေမပါဘူး။ ဖေဖေနဲ့ မေမေ စိတ်တွေ ကွေးကြလို့ ဆိုပဲ။ မောင်လေးကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားရတဲ့ မေမေနဲ့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်သား ရုပ်ရှင်ထိုင်ကြည့်နေတာ… ဘာတွေပြမှန်းမသိဘူး။ အိပ်ငိုက်လာတယ်။ မေမေ့ကိုပြောတယ် အိမ်ပြန်မယ် အိပ်ငိုက်နေပြီဆိုတော့၊ ရုပ်ရှင်ရုံထဲ ခုံတန်းတွေက လူနည်းလို့ရော အလယ်ပိုင်းခပ်ကျကျ ဆိုတာကြောင့်ရော လွတ်နေတော့ ခုံတန်းပေါ်မှာပဲ အိပ်လိုက်ဖို့ပြောပါတယ်။ ရွှေထီးလည်း မဆောင်းရပါဘဲ ဆန်မရှိ အစားကြီးတဲ့ မေလေးက အခြေကြီးပြီး မအိပ်တတ်ပါဘူး။ ဒီတိုင်း ထိုင်ငိုက်တာမှာ ငိုက်ရင်း ငိုက်ရင်း မျက်စိထဲ သံမံတလင်းအခင်းကို အိမ်က အိပ်ရာခင်းမှတ်သွားပါတယ်။ ခုံပေါ်ကနေ ဒိုင်ဗင်ခုန်ဆင်းလိုက်တာမှာ အိမ်ကြမ်းခင်းမဟုတ်တဲ့ သံမံတလင်းနဲ့ ကိုယ့်နဖူးက သွားမိတ်ဆက်၊ သွေးတွေ ထွက်လာပါရော။။။ ဟဟားး မေမေက ကမန်းကတန်း သူယူလာတဲ့ ပဝါနဲ့ သုတ်ပေးတာ မရပ်ဘူး။ ဒါနဲ့ သားအမိသုံးယောက် ရုပ်ရှင်ရုံထဲက ထွက်ကြရတာပေါ့။ မေမေက ဗိုက်နဲ့မို့ ကိုယ်ရယ်၊ ညီမလေးရယ်ကို လက်တဖက်စီ ဆွဲပြီး လမ်းလျှောက်ပြန်တာမှာ… နာပြီး သွေးထွက်နေတဲ့ ကိုယ်က မငိုရပါဘဲ ညီမလေးက အစားငိုပေးပါတယ်။ သူ့ကို မချီလို့တဲ့ ။ ကိုယ်က ကိုယ့်အနာကို ပဝါနဲ့ပိတ်ရင်း မေမေ့ကို ထမီစဆွဲပြီး လျှောက်၊ ညီမလေးကိုတော့ မေမေက ချီလိုက်ရတာပေါ့။ နော်။ သွေးထွက်နေတဲ့ အနာတောင် ဘယ်မှာ နာရမလဲ မသိအောင် လွဲတာ။။။ (ငိုမှ မငိုဖြစ်ဘဲ…..)
--- မေမေနဲ့ဖေဖေက စကားပြောရင် စကားပုံတွေ ပါတတ်တယ်။ ကိုယ်တွေကို ပြောမရရင်လေ။ နင်တို့ကို ပြောရတာ ကျွဲပါးစောင်းတီး နေသလိုပဲတဲ့။ ကျွဲအပါးမှာ ဘာလို့ စောင်းသွားတီးတာပါလိမ့်လို့ပဲ တွေးမိပါတယ်။ ဖေဖေပြောတာကို မနာဘူး လုံးဝ။ အလုပ်လုပ်ရင် ကောင်းကောင်းလုပ်ကြ။ ဘဲချေးပန်းသလို မလုပ်ကြနဲ့တဲ့။ ဖေဖေ ဘဲတွေ ချေးပါတာကိုတောင် သေချာကြည့်ထားတာပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ မနာဘူး။ မေမေက ခိုင်းလိုက်လို့ ကြာနေရင် ပြန်လာတော့ ကြားရမှာက နတ်ကရာ ကျီးမော့ နေတယ်ဆိုတာပဲ။ အမှန်တကယ်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ဟိုငေး ဒီငေး တွေ့ကရာ စာတွေ လိုက်ဖတ်နေတတ်တာမို့ တခုခုခိုင်းရင် အချိန်က ကြာတာပဲ။ ဒါပေမယ့် တလွဲတွေးတတ်တဲ့ မေလေးလေ။ မေမေ့ကို ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ကျီးက ဘယ်လို မော့မလဲ မေမေရယ်လို့။ သမီးကပဲ မော့ငေးနေတာလို့း)
--- ဆံပင်တိုတိုနဲ့ ရှပ်တွေ အဝတ်များတာမို့ မျက်နှာဆင်တဲ့ မောင်ဝမ်းကွဲနဲ့ အမွှာလား မေးခံရပါတယ်။ ခုန်ပျံကျော်လွှား သစ်ပင်တက်၊ စွန်လွှတ်၊ ဂျင်ပေါက်ကစားတာကိုလည်း ရတာမို့ ခု အဝေးကိုရောက်နေတဲ့ ဦးငယ်တစ်ယောက်က မေမေ့ကို မေးတာက ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ အစ်မသားကြီးရော အိမ်ထောင်ကျပလားတဲ့ ကဲ (သူနဲ့က ငယ်ငယ်တည်းက ဝေးနေတာဆိုတော့လေ)
--- ကိုယ်ရှစ်နှစ်ကိုးနှစ်လောက်မှာ အဘိုးက ဒီဘက်ကို ခရီးထွက်လာမှာမို့ မြေးတွေ ဓါတ်ပုံရိုက်ခိုင်းပါတယ်။ ကိုယ်တို့ မောင်နှမသုံးယောက်ရယ် ညီမလေးဝမ်းကွဲ၊ မောင်ဝမ်းကွဲ သုံးယောက်ရယ် ဓါတ်ပုံတိုက်ကို သွားရိုက်ရရော။ ကိုယ်တွေကို တန်းစီရပ်ခိုင်းပြီး တည့်တည့်ကြည့်နေခိုင်းပါတယ်။ ကိုယ်က ခေါင်းတခြမ်းစောင်းနေလိုက်တယ်။ ဓါတ်ပုံဆရာက တည့်ခိုင်းတယ်။ ကိုယ်က မပြင်ဘူး။ ဒီတိုင်းနေနေတာပဲ။ ဘေးမှာညီမလေးက ပြီးဖြီးဖြီးတောင် ဖြစ်နေပြီ။ ကိုယ်က မျက်နှာရှုသိုးသိုးဖြစ်တုန်း၊ ဓါတ်ပုံဆရာကလည်း မပြောတော့ဘဲ ဒီတိုင်းရိုက်လိုက်ပါတယ်။ အမှန်က ကိုယ်က ကင်မရာကို ကြည့်နေတာ။ ဘယ်ထဲက ဘာထွက်လာတာလဲလို့လေ။ သူက ဝေးနေတော့ သေချာမမြင်ရဘူး။ ဒါကြောင့် ခေါင်းစောင်းပြီး အားထည့်ကြည့်နေတာ… ဟဲဟဲ ဒီအတိုင်းပဲ ကင်မရာမဲမဲကိုပဲ မြင်ရပါတယ်။း)
--- ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်သွားရင် မေမေက အတိုပဲကြိုက်တာမို့ ဒိုင်ယာနာကေပဲ ညှပ်ပေးပါတယ်။ အဲတုန်းက ဒိုင်ယာနာဆိုတာ ဘာမှန်းမသိဘူး။ လုပ်ပေးတဲ့အတိုင်းနေလိုက်တာပဲ။ တခါ ဆံပင်ကို မညှပ်ဖြစ်ဘဲ ရှည်သွားရော။ မေမေ့ကို ဘိုးဘိုးကလည်း ဆူတယ်လေ။ သမီးမိန်းကလေးတွေကို ဆံပင်တိုပုံစံထားထားလို့ဆိုပြီး။ ဒါနဲ့ ဆံပင်ဆိုင် သွားပြီး အရှေ့လေးကို ပန်းကေ ဆိုလား ကောက်ပေးပါတယ်။ မှန်ထဲကြည့်ကြည့်ပြီး ငိုတာ။ ခေါင်းပေါ် အမှိုက်လာတင်ထားတယ် ဖြုတ်ပေးဆိုပြီးတော့်လေ။ ဒီတော့ကာ နားညီးလွယ်။ စိတ်မရှည်လွယ်တဲ့ မေမေက မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ခေါ်ပြီး ဒီပြဿနာကို ရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်သွားတာပဲ။ ပေါ့သွားလို့လေ။ ကတုံး တုံးပေးလိုက်တာပါး)
--- ဒုတိယတန်းအရောက်မှာ မေမေက ကျောင်းကို သွားအပ်ထားပြီး တန်းခွဲကို မမှတ်ခဲ့ဘူး။ ကျောင်းဖွင့်ရက်မှာ ကိုယ်နဲ့ညိမလေး ဒိတိုင်း ကျောင်းသွား၊ ညီမလေးကိုတော့ ကိုယ်က အခန်းထိ သွားထားပြိး ကိုယ့်အခန်းကိုတော့ မသိဘူးလေ။ ဟဟား လွယ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ တန်းခွဲ သုံးခုက အတန်းပိုင်ဆရာမတွေဆီ ပြေးပြေးမေးတာ။ ကျောင်းလာအပ်တုန်းက တန်းခွဲစာရင်း မချရသေးလို့ မရေးရသေးရင်းနဲ့ ကိုယ့်နာမည်က ဘယ်တန်းခွဲမှာမှ မပါတာတဲ့။ နောက်ဆုံး တန်းခွဲဘီက ဆရာမကပဲ သမီး ဒီမှာပဲ တက်တော့လို့ ပြောပြီး စာရင်းယူလိုက်ပါတယ်။ ကောင်းလေစွ။ အေ အခန်းစာရင်းမှာ ကိုယ်က ထိပ်ဆုံးဖြစ်ပါလျက် နာမည်မပါသွားတော့ဘူး။ ဘီမှာပဲ အခြေတည်လိုက်ရတယ်လေး)
အလွဲများ ၃ ဆက်ရန်….းP
ရေးသားသူ maylay2comments:
မေလေးရဲ့ အလွဲများ ၁
--- လောကကြီးထဲ စရောက်မယ်ဆိုတည်းက အလွဲနဲ့ပဲ စတင်ရတာပါပဲ။ မေမေက စနေနေ့တည်းက ဗိုက်နာပါတယ်။ သားဦးမို့ စနေမှာ မွေးမှာလည်း ကြောက်ကြတာပေါ့။ မွေးမလား၊ မွေးမလားနဲ့ သုံးရက်လွန်မြောက် ဗုဒ္ဒဟူးမနက်ရောက်ခါမှ နေတက်စ မှာ မွေးပါတယ်။ (အဲဒါကြောင့် ခေါင်းမာတယ်ဆိုပဲးP)
--- ဘယ်လမှာ မွေးတယ် ထင်ပါသလဲ။ မြန်မာစကားမှာ ရှိတယ်မို့လား ။ “ယောင်္ကျားဝါဆို၊ မိန်းမပြာသို” ဆိုတာ။ ကိုယ်က ဝါဆိုလဆန်းမှာ မွေးပါတယ်။ ကဲ။။။။း)
--- မေ့ကလေး မေ့ကလေးဆိုပြီး (နောင် မေလေးလို့ ဖြစ်လာမယ့်နာမည်) နာမည် မပေးဖြစ်တော့ မွေးစာရင်းလုပ်တော့ မေမေက မရွေးတတ်၊ မမှည့်တတ်၊ အဖေကလည်း အမေသဘောကျဆိုတော့ကာ မေမေ့နာမည် လဲ့လဲ့ဝင်း ဆိုတာမှာ ဝင်းကို ငသတ်၊ ဝစ္စပေါက်ဖြုတ် မောက်ချ ရေးထည့်ပြီး ဝါ လုပ်။ ကိုယ့်နာမည် လဲ့လဲ့ဝါ ဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်။ (ဘယ်မှာမှ ရှာစရာ မလိုဘူး။ ကိုယ့်နာမည်အတွက်)း)
--- သားယောင်္ကျားလေးလိုချင်တဲ့ မေမေက ကိုယ့်ကို ယောင်္ကျားလေးလို ဆင်ပေးတော့ ဝတ်ရတာတွေက ရှပ်၊ ဘောင်းဘီတွေချည်းပဲ။ ဆံပင်တိုတိုနဲ့။ နားပေါက်ကို(အဘိုးတို့က ဖောက်ခိုင်းလွန်းလို့)ဖောက်ပေးထားပြီး ဘာမှ မပေးဝတ်ထားဘူး။ ကောင်းလေစွ။ ဒါတောင် ဖောက်လွဲလို့ ညာဖက်မှာ နှစ်ပေါက်ဆင့်ဖြစ်နေတယ်။း)
--- ကျောင်းနေအရွယ်ရောက်တော့ ဂါဝန်တွေ ဝယ်ပေးရတော့ ဘဝင်မကျတဲ့ မေမေက ရှပ်အင်္ကျီပုံစံ(ရဲမေယူနီဖောင်းပုံစံပခုံးခံနဲ့)ကို ချုပ်ပေးပြီး စကတ်တိုနဲ့ ပေးဝတ်ပါတယ်။ (ငယ်ငယ်က ကိုးရိုးကားရားကို နိုင်လို့)
--- ညီမလေးနဲ့ မောင်လေး ကို ထပ်ပိုင်ဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်က ၆ နှစ်သမီးအရွယ်ရှိပြီမို့ ကလေးမွေးခြင်းဆိုတာကို နည်းနည်း နားလည်လာပါပြီ။ နားလည်တာက ဒီလို…။ ဗိုက်ပူပူထဲကနေ ကလေးလေး မွေးတယ် ဆိုတာပဲ။ ဒီတော့ ဖေဖေ့ကို ပြောတယ်။ မောင်လေးကို ဖေဖေ မွေးပြီး ညီမလေးကို မေမေမွေးတာမို့လား။ ဖေဖေပဲ နောက်မောင်လေးတစ်ယောက် မွေးပေးပါ။ မောင်လေးပဲ လိုချင်တယ် ဖေဖေလို့။ (ဟေ တခွန်းတည်း ပြောပြီး ဖေဖေ ပါးစပ် ဟနေပါရော) ဒါလေးပြောတာ ပါးစပ်ဟစရာလားလို့ အတင်းထပ်ပူဆာ …. ဟဟားးး။ ကိုယ်က နောက်ကနေ ပုဆိုးစဆွဲရင်းလိုက်နေတာကို ဖေဖေ ချွေးထွက်အောင် ပြေးရင်း မေမေကပဲ မွေးနိုင်တာကိုပြောပြပါတယ်။ ဒါဖြင့် ဖေဖေ့ ဗိုက်က ဘာလို့ပူနေတာလဲ မေးလိုက်တာပေါ့။ ဘာရမလဲ….း)
--- မေမေနဲ့အတူ မြို့သစ်က ဘွားလေးဆီ သွားလည်ပြီး ပြန်လာတော့ လိုင်းကားစီး ပြန်လာတော့ ကိုယ်က ဟိုဒီငေးပြီး စိတ်ဝင်စားနေတာပေါ့။ မော်လမြိုင်လိုင်းကားပေါ်မှာကလည်း ရွာတွေဘက်က တက်လာပြီမှဆိုရင်ဖြင့် ကား ဟိုဘက်ထိပ် ဒီဘက်ထိပ်ကို မွန်လို အော်ပြောတတ်ကြတာဆိုပဲ။ နားထဲ မွန်စကားကို နားရည်မရှိတော့ ဘာတွေလှိမ့်ပြောနေတာလဲ ဆိုပြီး ခေါင်းကို လည်နေတာပဲ။ ဟိုဘက်နားထောင်လိုက် ဒီဘက် နားစွင့်လိုက်နဲ့လေ။ အဲ့မှာ လိုင်းကားမှတ်တိုင်တွေနားရောက်ပြီဆိုရင် စပယ်ယာကို အော်ပြော၊ စပယ်ယာက ပြန်အော်ပြော ပြီးရင် မှတ်တိုင်ရောက်ရင် ကားရပ်၊ ဆင်းကြရတာကလား။
-ဘိုးဘွားပါတယ် ဆိုတဲ့ အော်သံအပြီးမှာ ကားရပ်တော့ အဖိုး အဖွားနှစ်ယောက် ဆင်းသွားတယ်။
-မောင်ငံပါတယ်ဆိုပြီး လူငယ်အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ဆင်းသွားတယ်။ ခဏနေတော့ - မီးသတ်ပါတယ်တဲ့။ အော်သံအပြီးမှာ ကားရပ်၊ မီးသတ်ဝတ်စုံနဲ့ ဦးကြီးတစ်ယောက် ဆင်းသွားပါတယ်။ (အဲဒီအရွယ်မှာ သတင်းစာဖတ်၊ သူများအိမ်က တီဗီငေးပြီး သက်ဆိုင်ရာ ယူနီဖောင်းတွေကို နည်းနည်း သိနေပါပြီ။)
-ပြီးတော့ အလုပ်သမား ပါတယ်ဟေ့ဆိုပြီး ကားတုံ့ရပ်သွားတာနဲ့ အလုပ်သမားဝတ်စုံပြည့်နဲ့ ဦးကြီးတစ်ယောက် ဆင်းသွားပြန်ပါတယ်။ ကိုယ်တို့ ရပ်ကွက်လေးလည်း သိပ်မကျန်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်က ငေးလှည့်ကြည့်ကောင်းတုန်းပေါ့။ အဲဒီမှာ ---- ဒေါ်ခင်ကြည်ပါတယ် ဆိုပြီး မိန်းမကြီးတစ်ယောက် အော်ပါတယ်။ ပြီး ကားရပ်တော့ အဲဒီမိန်းမကြီး(မေမေတို့လောက်ရှိ) ဆင်းသွားတယ်။
---- မေမေ့ကို လှည့်မေးလိုက်တယ်။ မေမေ သမီးတို့ နေတဲ့လမ်းထဲ ရောက်တော့မယ်မို့လားလို့ပေါ့။ မေမေက အင်းလို့ ဆိုတာနဲ့ ဒါဖြင့် မေလေးပါတယ်လို့ အော်လိုက်မယ်လေနော် လို့ မေမေ အလန့်တကြားဖြစ်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ဈေးကလေး ပါတယ်ဆိုပြီး ကားရပ်တော့ ဆင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ကို လက်ဆွဲရင်းပေါ့လေ။ ကိုယ်တို့က မင်္ဂလာဈေးရှေ့မှာ နေတာပါ။ ဘယ့်နှယ် ဈေးကလေးလဲ လို့ မေမေ့ကိုမေးတော့ “သမီးရယ်။ ဟိုးးးးတခါ သွားတာ ဈေးကြီး။ ဒါက ဈေးသေးသေးလေးမို့ ဈေးကလေး လို့ ခေါ်နေကြတာပေါ့” လို့ ပြောပြပါတယ်။ ( ဈေးတောင်မှ အကြီးအသေး၊ အမေနဲ့ ကလေးပေ့ါလို့ တွေးဖြစ်အောင် တွေးလိုက်ပါသေးတယ်း)
---ဘိုးဘွား = ဘိုးဘွားရိပ်သာ / မောင်ငံ = မောင်ငံရပ်ကွက် / မီးသတ် = မီးသတ်ဌာန / အလုပ်သမား = အလုပ်သမားရုံး / ဒေါ်ခင်ကြည် = ဒေါ်ခင်ကြည် အမျိုးသမီးသားဖွားမီးယပ်ဆေးရုံ တွေပါတဲ့။ မော်လမြိုင်မှာက ကားမှတ်တိုင်က နံပါတ်တွေရှိပေမယ့် မှတ်တိုင်ရှိနေရာက အဆောက်အဦး။ နေရာ စတာတွေကို စွဲပြီး ကားမှတ်တိုင်အမှတ်သညာ ပြုကြပါသတဲ့ ။ မေမေ ရှင်းပြမှ သိတာလေ :PPPP
နောက်များမှ အလွဲများ ၂ ကို ဆက်ရေးပါဦးမယ်ရှင့်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည် ဆက်မဖြစ်တည်ရ။
ကျမက တိုင်းတပါးရောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှ မတတ်တာမို့ တတ်တာ သိတာလေးနဲ့ပဲ ပန်ကြားပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူ ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာနဲ့ မြစ်ဧရာအကြောင်းတစေ့တစောင်းမက ကြားနေခဲ့ သိနေခဲ့ရတာကိုပဲ ဆန္ဒပြုပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ ငါတို့သာ သိတာမို့ပါ ဆိုရင်တော့ ကျမတို့ သုံးလူ့လောကမှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်သာလျှင် အတုမရှိ အနှိုင်းမဲ့ အလုံးစုံ သိတော်မူသော အရှင် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အရင် ပြောပါရစေ။ ငါသာလျှင် အသိဆုံးဆိုရင်ဖြင့် ဘုရားရှင်နဲ့ ကိုယ့်ကို နှိုင်းယှဉ်နေမိတာမျိုး ဖြစ်သွားနိင်တာမို့ ဒီလို နှိုင်းယှဉ်မိရင်ဖြင့် အပယ်ရောက်မယ့်အရေးကို တင်ကြို သတိပေးပါရစေ။ ဘယ်သူမှ အသိဆုံး မရှိပါဘူး။ ကိုယ်တွေအသိဆုံးဆိုရင် ဒါ ကိုယ်ကျိုးတခုတည်း ဖြစ်မှာပါပဲ။
၁. ကျမတို့ မြန်မာပြည်လူဦးရေ သန်း ၆၀ ရဲ့ ၇၀% ဟာ ဧရာဝတီမြစ်ကို အမှီပြုပြီး အသက်ဆက်နေခဲ့တာ။ မြန်မာပြည်သားရယ်လို့ ဖြစ်နေခဲ့တာ မဟုတ်ပါလားရှင်။
၂. ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ၅၄% မျှ ကျယ်ဝန်းတာမို့ ဒီမြစ်ဟာဖြင့် မြန်မာပြည်ရဲ့ အသက်သွေးကြော မဟုတ်ပါလားရှင်။
၃. ဧရာဝတီမြစ်ကြောင့် သမိုင်းတွေ ရေးနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ မြန်မာမင်းမှန်သမျှ ဧရာဝတီနဲ့ သမိုင်းထွင်းခဲ့ရပြီး ဧရာဝတီကိုတော့ စီးပွားသဘောက်တွေ ဆန္ဒအလျောက် မလုပ်ခဲ့ကြဘူး မဟုတ်လားရှင်။
၄. ခု ဧရာဝတီကို တားဆို့ ပိတ်ဆီး ဆည်ဆောက်ကြမယ်ပေါ့။ ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေအရပဲလို့ဆိုဆို စီးပွားရေးအရပဲပြောပြော ဧရာဝတီကို ဘာကြောင့် ပိုင်းဖြတ်ချင်ရတာလဲ။ ဧရာဝတီဟာ ဈေးကွက်တင်ရောင်းရမယ့် အရာမှ မဟုတ်တာပဲ။
၅. ဧရာဝတီမြစ်ကို တားပြီး ဆည်ဆောက်တဲ့အတွက် ဆည်ဆောက်ရာဧရိယာဟာ အတော်အတန် ကျယ်ဝန်း(အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ဧရိယာနီးပါး)တယ်လို့ သိရတော့ ဒီဧရိယာရရှိဖို့ မြေနေရာအတွက် ဖယ်ပေးလိုက်ရမယ့် ပြည်သူတွေအတွက် နေဖို့၊ ပြီးတော့ သူတို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်အတည်တကျဖြစ်ရဖို့ ဘယ်သူကများ အတိအလင်းတာဝန်ယူပေးမှာလဲရှင်။
၆. မြစ်အထက်ပိုင်းကို ပိုင်းဖြတ်ပိတ်ဆို့ ပြီးတဲ့အတွက် ကျန်မြစ်အောက်ပိုင်းမှာ ရှိမယ့် မြစ်ဝှမ်းဒေသတွေအတွက် မြစ်ကိုမှီခိုပြီး အသက်ဆက်နေရသူတွေ( စိုက်ပျိုးရေး။ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရေလုပ်ငန်း၊ ပညာရေးအစရှိသဖြင့်x ) ကို ဘယ်လိုများ အသက်ဆက်စေမှာလဲရှင်။
၇. မြစ်အထက်မှာ ပိတ်တော့ မြစ်အောက်ပိုင်း ရေခမ်း၊ ကမ်းပါးပြို၊ ဒီရောက်တောတွေပျက်စီး၊ မြစ်ခမ်းတော့ ပင်လယ်ထဲ ရေမစီးဝင်နိုင်ရင် ပင်လယ်က ဆားငံရေတွေ မြစ်ကြောတလျှောက် ပြန်ဝင်ပြီး အဲ့ဒီဒေသတွေအတွက်ရော ဘာများ ပြင်ဆင်ထားပါပြီလဲ။
၈. ဒီနောက်မှာတော့ အကာအကွယ်မရှိဖြစ်တော့မယ့် မြစ်ဝှမ်းဒေသတလျှောက်က ရာသီဥတု ဆိုးရွားမှုတွေကို ဒေသနေပြည်သူတွေဆီကို တိုက်ရိုက်ရောက်လာတော့မှာမို့ သူဆင်းရဲ ပြည်သူတွေ ဒီထက် ပျက်စီးရပါဦးမယ်။
၉. လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မလုံလောက်လို့များ ကျမတို့ မြန်မာပြည်သားတွေ ထိုင်ငိုနေခဲ့ဖူးသလား။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား အပြည့်အဝပေးရေး လို့များ ကြွေးကြော်တောင်းဆိုဖူးခဲ့ကြသလား။ ရေနံဆီမီးခွက်နဲ့ ဖယောင်းတိုင်နဲ့ကိုပဲ အေးချမ်းနေတတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ ဧရာဝတီကို ပိုင်းဖြတ်သတ်ပြီးမှ ဒီလျှပ်စစ်မီး ရရမှာတဲ့လား။ အဲဒီလို လုပ်စရာ မလိုအပ်နေပါဘူးရှင်။
၁၀. တကယ်တမ်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကျမတို့ချည်းပဲ သုံးရမယ်တဲ့လား။ ကျမတို့မြန်မာပြည်သားတွေပဲ သုံးရဖို့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရဖို့ ဒီမြစ်ကြီးကို ပိုင်းဖြတ်မှ ရရမှာတဲ့လား။ မလိုအပ်ပါဘူးလို့ ပြောပါရစေ။
၁၁. နိုင်ငံနဲ့အဝှမ်း ခု မြစ်ဆုံ၊ နောင် မြစ်ဝှမ်းအားလုံး (သံလွင်၊ ချင်းတွင်းမြစ်တို့အပါအဝင်) နီးပါး ဆည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ ”သောင်းကျန်းသူနှိမ်နင်းရေး မဟာဗျူဟာ” ကြောင့်များ ကျမတို့အသက်သွေး မြစ်ဧရာကို စပြိး စတေးခံရဖို့လား။
အမေးးတွေချည်းဖြစ်နေလို့များ လူကြီးမင်းတို့ အချိန်အလဟဿ မဖြစ်စေချင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီထက်ဒီထက်မက ကျမတို့ ပြည်သူတွေ ကလောင်ကိုင်တွေက လူကြီးမင်းတို့ကို ပြောခဲ့ကြပြီးပြီ။ အလေးမထားဘဲ ငါတကောကောတာမျိုး မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ မြန်မာဟာ မြန်မာတွေ အားလုံးသွေးစည်းညီညွတ်ခဲ့ကြလို့ တစ်ဦးကောင်းတည်း မလုပ်ခဲ့ကြလို့ ခုထိ ရှင်သန်နေခဲ့ကြတာပါ။ ကျမတို့ကို (မြန်မာပြည်သားတွေကို)
လူကြီးမင်းတို့အပါအဝင် ကျမတို့မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ အသက်သွေးဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကို လူကြီးမင်းတို့လည်း ချစ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ခုလို ရေးတဲ့ စာ၊ ကန့်ကွက်စာတွေကို လူကြီးမင်းတို့ အသိအမှတ်မပြုရင်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ဟာ မြန်မာပြည်ကို မချစ်သော၊ မြန်မာပြည်သူတွေကို မချစ်၍ အလေးမထားသော၊ မြန်မာပြည်ကို မချစ်သဖြင့် မြန်မာလူမျိုး မဟုတ်သော သူတွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာမဟုတ်ရင်ဖြင့်…….မြန်မာလူကြီးလုပ်လို့ မရပါဘူး။
ရေးသားသူ maylay7comments: